စီးရန်ပြင်သစ်ကြိယာကဘာလဲ? - အကောင်းဆုံးအဖြေများ
အဓိက > အကောင်းဆုံးအဖြေများ > ပြင်သစ်ဘာသာစကားဖြင့်စီးရန် - သင်မည်သို့ဖြေရှင်းမည်နည်း
ပြင်သစ်ဘာသာစကားဖြင့်စီးရန် - သင်မည်သို့ဖြေရှင်းမည်နည်း
စီးနင်းလိုက်ပါ? စီးနင်းလိုက်ပါ၊ စီးပါ၊ မောင်းပါ၊ စီးပါ။စီးနင်းလိုက်ပါ? ကား
ဟယ်လို။ နေကောင်းလား? ဒီနေ့ရွှေ့ပြောင်းတတ်လာတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုယူပြီး၊ တစ်နေရာရာသို့မည်သို့သွားရမည်၊
တစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ကို 'မင်းဒီကိုဘယ်လိုရောက်ခဲ့တာလဲ' လို့မေးကောင်းမေးလိမ့်မယ်။ 'ဘာလဲ? ငါမှာမှော်ကော်ဇောတစ်ထည်ရှိလို့ပျံသန်းခဲ့တယ်။ So. အဘယ်ကြောင့်? 'ကျနော်တို့ကနေရာများရတဲ့၏ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများရှိသည်။
ကြိယာများ - 'ငါဟာဘတ်စ်ကား'၊ 'ရထား'၊ 'တက္ကစီ' သို့မဟုတ် 'တက္ကစီ' ကိုယူခဲ့တယ်။ 'Taxi' နှင့် 'Taxi' တို့သည်အတူတူဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်သင် 'လေယာဉ်ပျံ' တစ်ခုယူနိုင်သည်။
ဒီနာမ်တွေအားလုံးနဲ့အတူ - အစီအစဉ်
ငါ၏အ, ဒါမှမဟုတ် '' ကား။ ' သို့ဆိုလျှင်အငှားယာဉ်နှင့်ကားတစ်စီး၊ အဖြေသိလားသူတို့ကသီးသန့်ဖြစ်တယ်။ သင့်ရဲ့ကားထဲမှာ (သို့) တက္ကစီမှာလူအများစုမရှိကြဘူး။ သူတို့ကသေးငယ်တယ်၊ ဆိုလိုတာကသူတို့မှာရထား၊ ဘတ်စ်ကားဒါမှမဟုတ်လေယာဉ်ပေါ်မှာလူတွေအများကြီးမတတ်နိုင်ကြဘူး။ ဒါနဲ့မင်းက 'ငါတက္ကစီထဲကိုတက်လာပြီးကျောင်းကိုလာခဲ့တယ်' လို့ပြောဖို့မေ့နေခဲ့တယ်။ ဒါမှမဟုတ် 'ငါတက္ကစီကထွက်ပြီးငါဘားကိုသွားခဲ့တယ်။ ' 'မြေအောက်ရထား' 'ဆိုတာဘာလဲ။ သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ? မြေအောက်ရထားဟာလူသိများပြီးလူသိများသည်ထင်လား။ ဒါဟာကြီးမားပြီးလူသိရှင်ကြားပါ ဒါကြောင့်သင်က 'မြေအောက်ရထား' ကိုသုံးတဲ့အခါ 'ငါရပြီ' သို့မဟုတ် 'ငါမြေအောက်ရထားလမ်းကနေထွက်လာပြီ' လို့ပြောမယ်။ ကျောင်းကိုဘယ်လိုရောက်လဲ သင်မောင်းလား မင်းလမ်းလျှောက်လား စက်ဘီးစီးပါသလား ကျွန်တော်စက်ဘီးစီးပါတယ် ကျွန်တော်စက်ဘီးကိုကြိုက်တယ် ငါအရင်ပြောခဲ့သလိုငါစက်ဘီးစီးတဲ့အခါငါတို့စီးကြတယ်။ ဒါကြောင့် 'ငါစက်ဘီးစီးတာ' လို့ပြောနိုင်တယ်။ ကျနော်တို့ '' စက်ဘီး '' လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ နှင့်အတိတ်တင်းမာနေ - မည်သူမဆိုအတိတ်ကာလကို 'စီးနင်း' သိခဲ့ပါသလား။ ဒါဟာနည်းနည်းထူးဆန်းပါတယ် 'ငါစီးခဲ့တယ်' လို့ပြောလိမ့်မယ်။ 'ဒီနေ့ဒီမှာငါ့စက်ဘီးကိုငါစီးသွားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ကိုပြောပါ။ နုတ်ဆက်ပါတယ်
ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့် B * * * * သည်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
1. (= ခွေး) chienne,f။ အလွန်အလွတ်သဘောထိုးစစ်) salopef(အလွန်အလွတ်သဘော)? Garcef။
ဒီနေ့ရှေးရှေးက Frenchaccents ကိုကြည့်ကြပါစို့aနှင့်a၏ထိပ်ကို တင်၍ Ianswered နှင့်ပြင်သစ်စကားဝိုင်းတွင်တွေ့ရသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ပြုရန်ကျွန်ုပ်လိုချင်သည်မှာကျွန်ုပ်တို့၌ပြင်သစ်၌ရှိထားသည့်အသံထွက်ကိုကြည့်ရှုရန်လိုသော dash နည်းနည်းသာဖြစ်သည်။ အဆင်မပြေတာအနည်းငယ်ရှိပေမယ့်ဒီနေ့အသံထွက်နှစ်ခုကိုအာရုံစူးစိုက်ချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Frenchaccent အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုပြောပြီးတဲ့နောက်အဆင်ပြေတာကိုဖတ်လိုက်ရင်သင်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိခြင်းကြောင့်ဖရန့်ကိုသင်ဖတ်တဲ့အခါသင်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အမှိုက်သရိုက်ရှိသည် - okaythis ကို axon ဟုခေါ်သည်။ ပုဆိန်ပုဆိန်လည်းသင်သတိထားမိပေမည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သွားသည်နှင့်တစ်ခါတစ်ရံအခြားလမ်းသွားကောင်းမွန်စွာသွားနိုင်သည်၎င်းသည် apurpose အဆင်ပြေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သတိပြုမိလျှင်သင်မှန်ကန်စွာရေးရန်လိုအပ်သည်။ သင်ဖတ်ရှုဖို့လိုသည် - ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကထိပ်ဆုံးမှာအသံ okaylet ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကို axon ပေါ်ရှိ goo oracute accent မဟုတ်ဘဲချစ်စရာဝဲသံကိုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်ယခု axon aghhhhhhh ကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ က likethis it လက်ျာလက်ယာဘက်မှယခုမှလက်ျာဘက်သို့ရွေ့လျားသွားသောeနှင့်a- အဆင်ပြေမှုရှိသည်။ ဤအသံထွက်လာသည်နှင့်အမျှသင်သည် axon aigoo နေရာတွင် Lou baby ကဲ့သို့ကလေးငယ်လေး bluebaby ကိုတွေ့နိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်က lickylicky တွင်တွေ့နိုင်သည်။ ပေါလ်သည်ပေါလ်ပေါလ် (Z) ကပေါလ်၏စာတွင်နှုတ်ဆက်စကားကိုပေါလ်ကအဆင်ပြေစွာစာလုံးပေါင်းတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုသင်ကြည့်ပြီးပါပြီ။ ၎င်းတွင်ပုဆိန်နှစ်ဆရှိသည်။ ဆိုလိုတာက okaycreate ကိုဆိုလိုတယ်၊ ဒါဆိုသင်က Tiger နဲ့နောက်တစ်ခုကိုနောက်တစ်ခုထားလို့ရပြီ။ အဆင်ပြေတယ်။ ငါ့ရဲ့ပထမဆုံး axon ဟာ axon ague theone ပါ။ လူတိုင်းသိတဲ့အတိုင်းအခုဘယ်လိုပြောရမလဲအခြားအသံထွက်ငါလိုချင်တယ်။ နည်းနည်းတော့အဆင်ပြေပေမယ့်ဒီနှစ်ခုကိုဒီနေရာမှာပဲအာရုံစိုက်မယ်။ axial glove or graveaccent ကောင်းပြီ။ axon curve ကအခြားညွှန်ကြားချက်ပဲ။ ဒါကြောင့်ညာဘက်ကနေစပြီးတော့ဘယ်ဘက်ဆီကိုသွားပါ။မတူကွဲပြားတဲ့အသံတွေထွက်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် theaxon curve ဟာအခုဆိုရင်သင် accent လက်အိတ်ကို aand E ဖြစ်သည့်သင်နှင့်လည်းစောင့်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင် axon5ရှိလျှင်အသံအသစ်သည်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ orkim သို့သော် အကယ်၍သာ ၎င်းကိုထည့်ပါကယခုရှင်းလင်းပါက axon curve ကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောအစ်ကိုဖြစ်သူ Lu pair တစုံ၏ဖခင် la Mer သည်ထိုအရာသည်အခြားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ကအိုဇုန်းလွှာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်သည်။ ကြက်ဥသည်ဤဝဲသံနှင့်အတူကြက်ဥသည်မည်သည့်အရာဖြစ်သည်ကိုဆိုလိုသည် atokay သို့မဟုတ်ဆိုလိုသည်မှာ - အိုကေ၊ နင်သင်ယခုအသံထွက်ကိုဤတွင်သတိပြုပါ။ ဤအရာကိုသတိပြုပါ။ အသံတစ်သံတည်းစကားလုံးနှစ်လုံးသံမဏိသံစဉ်များ။ ငါထင်ပါတယ်အိုး၊ မတူကွဲပြားသောအရာနှစ်ခုကိုဆိုလိုသည်။ မင်းကမင်းရဲ့ဆင်တစ်လုံးရှိရင် theooh ဆိုလိုတာက Arden ရဲ့အသစ်ကဘယ်နေရာလဲ။ accent classcurve အဓိပ္ပာယ်မရှိ၊ အဆင်ပြေလားဒါမှမဟုတ်ကော်ဖီ၊ လုံလောက်သောအဆင်ပြေကက်တီလီအဆင်ပြေပါသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကတစ်ခါတစ်ရံတွင် so1x I gear နှင့် 1x စကားလုံးတစ်လုံးတည်း၌ကွတ်နှစ်ခုနှင့်လုပ်ရပ်နှစ်ခုကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်ပြီးသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုသည်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြောင်းအလဲထို့နောက်အဆင်ပြေသောကြောင့်ဘုံနာမ်တွင်တွေ့လိမ့်မည် သင့်လျော်သော nounsorry Helen ကိုပြင်သစ်ဘာသာဖြင့်ဟယ်လင်မှာ Ln Lnnow ဖြစ်သည်။ XR သင်ကလပ်ပေါ်ရှိအချက်အလက်များသည် l EV11 တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဤစာလုံးကိုတွေ့လိမ့်မည်။ အလွန်ကွဲပြားသောသားအသံဖြစ်သော်လည်း LF ကိုအသုံးပြုသောအခါတိုင်း E ကိုသုံးသည်။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းခြင်းဟုအဓိပ္ပါယ်ရသောမာရ (Mare) ဆိုသည်မှာ FM ရေဒီယိုလှိုင်း၏ကြာရှည်မခံနိုင်မှုကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသလား။ သူတို့က ၂ ဆဖြစ်ကြောင်း၊ ရုတ်တရက်နှင့်နီကွန်းလက်အိတ်ရှိမှသာလျှင်ငါအသံပြောင်းလဲနေပါသေးသည်။ share ကဆိုလိုတာက lightokayfeminine ဆိုတဲ့စကားလုံး Lea ကိုဒီစာလုံးနဲ့ရေးထားတာပါ။ didja didjaal မှာeအပေါ်မှာမင်းရဲ့ပုဆိန်နဲ့ graph ပိုင်ရှင် adiva ပေါ်ရှိပုဆိန်တစ်ခုရှိမယ်။ ဒါမှမဟုတ်သေပြီကိုဆိုလိုတာကိုဒီ setthis set မှာတွေ့လိမ့်မယ် ' ထိုင်နားမကြား effect okay Lou this setokay ဒါကြောင့်ငါမပြီးခင်အဓိကအသံထွက်ကိုမှတ်မိဖို့လိုတယ်။ ဒါက partone ဖြစ်တယ်၊ အခြားအသံထွက်တွေပေါ်လာရင်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုရှိသေးတယ်။ theaxon aigoo okay ကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်။ ဒီတစ်ခုနှင့်ကပြပါမယ်။ ဒီဟာက theaxon curve ကိုရှာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ မင်းကသာရှာတွေ့မှာပါ။ ပြီးတော့ thepronunciation နှစ်ခုလုံးကအဆင်မပြေပါဘူး။ ဒီဝါကျကိုကြည့်ပါမယ်။ လူသတ်မှုကမင်းကိုပြောတာကမင်းငါ့ကိုအသံထွက်များသုံးတာကပြေတာ့တာပဲ။ Bla doc docafe avec de la crémeအပန်းဖြေမှု။ Avex on live live me Ellenit သည်လူသူကင်းမဲ့သောနေရာဖြစ်သည်။ ယခုသူသည် bitmad ဖြစ်သော်လည်းသင်ဖတ်ထားသော Nittican ကိုကြည့်ပါ ကောင်းပါပြီကောင်းပြီကောင်းတာပေါ့ Lupair do baby ba du cafe avec du, hemleisure avec son Neil EV လိုမျိုးချည်နှောင်တာကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆင်ပြေနေပါစေ Ln L Zgive D ကဗျာရပြီအခုတော့ငါမတူကွဲပြားတဲ့အသံတစ်သံကိုပြောရင်ငါတို့အသံအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာပြနေတယ်။ ထိပ် နွေရာသီအချိန်ကာလတွင် ena aana T ၏ရင်သွေးငယ်လေး၏ဖခင်ဖြစ်သူသည်အလင်းရောင်ရှိခြင်းနှင့်အတူကော်ဖီဖျော်ထားသောကော်ဖီဖျော်ရည်ကိုဖျော်ဖြေသောကလေးငယ်၏ဖခင်ကိုဟယ်လင်ဟုခေါ်သောသူ၏ကျောင်းသားနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေမည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းမျှော်လင့်ပါသည်။ ဒီအသံထွက်ကိုပထမသင်ခန်းစာကမင်းကိုအသုံးမ ၀ င်ဘူး။ ဒီဝဲကဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းသိချင်ခဲ့ဖူးတယ်။ မင်းကိုတတ်နိုင်သလောက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြဖို့ငါကြိုးစားခဲ့တယ်။ ငါအတွက် myyoutube channel ကိုစာရင်းသွင်းပြီးမှတ်မိဖို့သတိရပါ၊ သူတို့ကတကယ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးနေတယ်၊ ​​ဘာလို့ mywebsite ကိုပြင်သစ်ဘာသာကို alexa.com နဲ့လေ့လာမလဲ။ ပြင်သစ်နှင့်ပြင်သစ်ကိုပိုမိုမြင့်မားသော levelokay သို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်တွင် patreon စာမျက်နှာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်ပြင်ဆင်ထားသော Bisou Bisou ၏ patreon စာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ။
ဎ။ အတော်များများ; အတော်များများ; အများကြီး။
Salut! ပြင်သစ်ဘာသာတွင်စကားလုံးတစ်လုံးသည်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသောအဓိပ္ပါယ်များစွာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် - Passer! ဒီကြိယာကိုအခြေအနေအမျိုးမျိုးမှာသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်အခြေအနေတွေအတိအကျလဲ။ အခုရှာကြည့်ရအောင်။ ငါGéraldineပါပဲ။ Française TV, Comme une comme une TV, Sound French, French တို့တောင်မှ! Tu ကà la maison ဖြတ်သန်း? la maison? ဆိုလိုတာက 'မင်းအိမ်ကိုလွှဲနိုင်သလား?' ဒါမှမဟုတ် 'ငါ့အိမ်ကိုလာချင်သလား' လို့ဆိုလိုတယ်။ အေးမြတဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ဖို့၊ တစ်ခုခုပြန်ရဖို့ဒါမှမဟုတ်သောက်ဖို့နဲ့စကားပြောဖို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒီပထမအခြေအနေမှာ Passer အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ committal invitation အနေဖြင့်သင်အသုံးပြုနိုင်သောအလွတ်သဘောဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။ အချိန်တိုအတွင်းဆိုလိုသော်လည်းအနည်းဆုံးဖော်ရွေသောစကားပြောဆိုမှုအတွက်လုံလောက်သည်။ ဤထက် ပို၍ မုန်းတီးပြီး၎င်းသည်ဖြတ်သန်းသွားသည်။ စာသားအရ“ လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းဖြင့်ရွေ့လျားခြင်း” - သင်ဟာပြတင်းပေါက်ကနေလေပြင်းတိုက်ခတ်သလိုမျိုးတိုတောင်းလှတဲ့အချိန်မှာမင်းဟာအပြင်ကိုထွက်သွားနေတယ်။ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအနေနဲ့ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးအတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်။ le facteur passera vers 11 he, စာပို့သမားရောက်လာလိမ့်မည်။ ၁၁။ တောင်မှ၊ bus n'est pas passé, ဘတ်စ်ကားပေါ်လာခြင်းမရှိပါ။ ဤ passer ၏အဓိပ္ပာယ်သည် passer dans la rue ဟူသောအသုံးအနှုန်းနှင့်အလွန်နီးကပ်သည်။ လမ်းဖြတ်လျှောက်သွားပြီးလမ်းပေါ်လျှောက်သွားသည်။ ထို့ကြောင့် passer-bys les passants ဟုခေါ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Passe-moi le selPasse-moi le sel, သို့မဟုတ်“ ဆားကိုလွန်သွားသည်” သည် passer ကိုအသုံးပြုသည်။ နေ့စဉ်မိန့်ခွန်းများတွင်မကြာခဏပြောဆိုလေ့ရှိသည့်အလှူရှင်များ၏ပေးဆပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားသောအလွတ်သဘောဖော်ပြချက်များမှာ - 'ကျွန်ုပ်သည်ဖိုင်များအားလုံးကိုရှာဖွေနိုင်ပါသလား။ ' သင်ဆားကို ကျေးဇူးပြု၍ သင်ပေးနိုင်ပါသလား။ ဤကြိယာကိုယ်တိုင်၊ , context.jpg သည် context အပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အဓိပ္ပာယ်များစွာရှိသည်။ နာမ် une passe ကဲ့သို့ pass သည်အားကစားတွင်အသုံးပြုသောအခါ“ လက်ဆောင်” ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။ သင်သည်ဘောလုံးကိုအခြားကစားသမားအားပေးသည်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ပြောသကဲ့သို့ `Fais la passe! ““ Ball the pass!” တရားမျှတမှုရှိရန်နာမ် une passe သည် (အရွယ်ရောက်ပြီးသူအချို့၏) အဓိပ္ပါယ်များလည်းပါ ၀ င်သည်၊ သို့သော်ယခုကျွန်ုပ်တို့ဤအရာထဲမ ၀ င်ပါ။ ) Comme le temps passe! Comme le temps passe! အချိန်မည်သို့ပျံသန်းသည်ကိုကြည့်ပါ။ Passer ကြိယာသည်အချိန်နှင့်အနီးကပ်ဆက်နွယ်သည်။ စက္ကန့်တိုင်းတွင်၊ le temps passe, အချိန်ကုန်လွန်နေသည်။ အကယ်၍ သင်သည်လက်ရှိအချိန်ကိုသင်ကြည့်ပါက…ကောင်းပြီ၊ သင်ပင်မကြိုးစားမီ le moment est passé, ယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှအရာအားလုံးကို le passé, past ဟူ၍ ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ဖြတ်သန်းသွားသူဆိုသည်မှာအချိန်ဖြုန်းခြင်း (သို့) အချိန်ကိုသတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုနိုင်သည်။ ဥပမာ -“ Elle passe trop de temps အင်တာနက်! 'သူမဟာအင်တာနက်ပေါ်မှာအချိန်အများကြီးကုန်နေတယ်။ ' ပြင်သစ်ဘာသာစကားတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်ကိုသတ်ပစ်ရန် passer du temps၊ အချိန်အတန်ကြာခြင်းနှင့် passerle temps တို့အတွက်ကြိယာတစ်ခုတည်းကိုအသုံးပြုသည်။ အမှန်တကယ်အသုံးပြုခြင်းတွင်ကွာခြားချက်မှာသိမ်မွေ့နက်နဲပြီးသဒ္ဒါအချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ မည်သည့်နေရာတွင်လိုအပ်သည်ကိုပြောနိုင်သည်။ “ ဒီနေ့မနက်မှာအတူတူအချိန်အကြာကြီးအတူနေခဲ့ကြရတယ်။ Passe du temps ensemble ce matin ။ Main jean pour passer le temps.We အတူတူအချိန်အကြာကြီးအတူတူနေခဲ့ကြတယ်။ ၀ ါသနာပါ ၀ င်မှုဝါသနာပါသည့်စကားလုံးသည်ပြင်သစ်ဘာသာပြန်ခြင်းများစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့အနက်မှတစ်ခုသည် un-passe-temps ဖြစ်သည်၊ စာသားအရ“ time-killer” ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်လျှင်၎င်းသည်မညီညွတ်သောစိတ်အားထက်သန်မှု၊ စိတ်အားထက်သန်မှုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ စိတ် ၀ င်စားဖွယ်“ သို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ” ဟုပြောပါ။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော ca သည်“ နှိုးဆော်ခြင်း” ဟုဆိုလိုသည်။ ရှက်ရွံ့ဖွယ်အမှားမဖြစ်စေပါနှင့်! Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? ဆိုလိုတာကဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။ ဆိုလိုတာကနည်းနည်းရိုးရှင်းတယ်။ ပြီးတော့အထူးစည်းမျဉ်းကိုသုံးတယ်။ မင်းတို့မြင်နိုင်တဲ့အတိုင်း“ t” အက္ခရာကိုအလယ်မှာထည့်လိုက်တယ်။ ဘာမှမအဓိပ္ပါယ်၊ သဒ္ဒါဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခုလည်းမရှိဘူး၊ artificiallycreate la liaison ။ ပိုမိုအသုံးများသောစကားစုများတွင် Qu'est-ce qu'il se passe အစားသင်ပြောနိုင်ပါသလား။ သို့မဟုတ် ထပ်မံ၍“ ဘာဖြစ်နေတာလဲ?” သို့မဟုတ်အလွတ်သဘောပင်အလွတ်သဘောဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့မဟုတ်အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်နေသနည်း။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သဒ္ဒါအရမှန်ကန်မှုမရှိသောသို့မဟုတ်ကြော့ရှင်းသောတည်ဆောက်မှုကိုအသုံးပြုသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အများအားဖြင့်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ အခုဒီနေ့မင်းဘဝမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။ ဒါပေမယ့်ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဒီအပိုင်းမှာငါနည်းနည်းလိမ်တာပေါ့။ ကြိယာကအတိအကျမလိုက်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုသိဖို့အတွက် pronominal se passer ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဥပမာစားသောက်ဆိုင်၌စားပွဲထိုးများအသုံးပြုသည့်စကားကိုသင်ကြားနိုင်သည့်ကြိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာ -“ sea se passe bien? Tou se passe comme vous voulez?”“ အရာရာတိုင်းအဆင်ပြေရဲ့လားအရာအားလုံးကိုသင်လိုချင်သလား?” မဟုတ်ပါ je passe ။ မဟုတ်ပါ၊ pas ဟုဆိုလိုသည်၊ မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သွားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာဂိမ်းများမှလာပါသည်။ အထူးသဖြင့်ဖဲချပ်ကဲ့သို့သောကဒ်ဂိမ်းများ၊ le tarot, ပြင်သစ်တွင်လူကြိုက်များသော le tarot ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ“ မင်းပြောနေတာကိုမင်းမလုပ်ချင်ဘူး” ဟုလည်းတစ်ခါတစ်ရံသုံးလေ့ရှိသည်။ သို့သော်ဤအသုံးပြုမှုကိုပြင်သစ်ဘာသာတွင်အင်္ဂလိပ်လိုအသုံးနည်းသည်ဟုခံစားမိသည်။ pasa passe! Ça passe! သို့မဟုတ်စာသားအရကိုက်ညီလျှင်၎င်းသည်ဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည်။ လူကြိုက်များသောအပြန်အလှန်ပြောဆိုသောစကားရပ်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် passer ၏အဓိပ္ပါယ်သည်ဆီလျော်သည်။ ဥပမာ -“ Ta voiture ne pourra pas passer dans ce tunnel!” “ မင်းရဲ့ကားကဒီဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကိုမဖြတ်နိုင်ဘူး၊ မစီးနိုင်ဘူး။ ” ၎င်းကိုပုံဆောင်သဘောအရအသုံးပြုသည်၊ “ လက်ခံသည်” ဆိုသည့်အဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလိုသည်။ သို့မဟုတ်မရ -“ La nouvelleadumal à passer auprès de la mère de Julie ။ ”“ ဂျူလီရဲ့အမေကဒီသတင်းကိုဒီလောက်ကိုင်တွယ်ဖို့အခက်တွေ့နေတယ်။ ”“ sea passe ou ça casse!” “ ဒါဟာကိုက်ညီသည်ဖြစ်စေချိုးဖဲ့သည်” …ဒီဟာကစွန့်စားရမှုမြင့်မားမှု၊ မြင့်မားသောဆုလာဘ်အခြေအနေအတွက်အသုံးအများဆုံးဖော်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ နာမဝိသေသနဖြတ်သန်းသွားသော၊ ဖြတ်သန်းသွားခြင်း၊ médiocreကိုပြောဆိုခြင်းဟာပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ စာမေးပွဲဖြေပြီးတဲ့နောက်အောင်ဆန်းစာမေးပွဲဖြေဆိုရန် (“ après l'avoir passé”)“ ကျွန်တော့်ကားမောင်းမှုအတွက်စာမေးပွဲအောင်မြင်ခဲ့တယ်။ လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်နဲ့ပထမဆုံးကြိုးစားမှုကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်တယ်။ ” ပြီးတော့ဒါကça passe ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က“ ဒီအချိန်အတွက်ကောင်းတယ်၊ ငါမင်းကိုမဆန့်ကျင်ဘူး” လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းပဲ။ “ Tu penses que je peux mettre une veste en jean, ou c'est démodé? - Pour moi, ça passe ။ ”“ ငါ့ဂျင်အင်္ကျီကို ၀ တ်လို့ရမယ်ထင်လား၊ ဒါမှမဟုတ်ဖက်ရှင်မကျဘူးလား?”“ ငါကအဆင်ပြေတယ်လို့ထင်တယ်။ ” Eti toi? Passer နှင့်မည်သည့်အခြားစာကြောင်းများကိုသင်သိသနည်း။ သင့်အတွက်အခြားပြင်သစ်စကားလုံးများသည်ကွဲပြားခြားနားပြီးရှုပ်ထွေးသောအဓိပ္ပာယ်များစွာရှိသည်။ မှတ်ချက်များကဏ္inတွင်ပြောပါ။ ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်က link ကိုCommeUneFrançaise.comဘလော့ဂ်ကိုတင်ထားတယ်။ ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာငါမှတ်ချက်တွေအားလုံးကိုဖတ်ပြီးသင့်မေးခွန်းတွေအားလုံးကိုဖြေကြားပေးတယ်။ ပိုလိုချင်လား“ Frenchconversation တွင်စကားလုံးတစ်လုံးကိုနားမလည်သောအခါမည်သို့တုံ့ပြန်ရမည်နည်း” ဟူသောသီးသန့်သင်ခန်းစာများကဲ့သို့။ ကျွန်ုပ်၏“ Everyday French Crash Course” တွင်ပါဝင်ရန်ယခုစာရင်းသွင်းပါ။ ၎င်းသည်ပြင်သစ်အသံထွက်ရန်အတွက်အခမဲ့ ၁၀ ရက်ကြာသင်တန်းအသေးစားဖြစ်သည်။ ပြင်ရန်ပင်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးနာမည်နှင့်အီးမေးလ်ပို့ပြီးသင်ရရှိပါလိမ့်မည် သင်ခန်းစာ 01 ချက်ချင်း။ အကောင်းဆုံးမှာအခမဲ့ဖြစ်သည်။ Comme une Française TV ကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ ပြင်သစ်အသံနှင့်ပြင်သစ်စကားလုံးများကိုကြည့်ခြင်းအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ Allez, salut!
ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့် AS နှင့် A အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။
ဟင်အားလုံး Candace မှဤနေရာတွင်ဆရာတစ် ဦး ကိုမေးရန်ဖိတ်ခေါ်သည်။ သင်၏အသုံးအများဆုံးပြင်သစ်မေးခွန်းအချို့ကိုဖြေပါ။ thislesson အတွက်မေးခွန်းမှာ apun and orange လိပ်စာ - အများကိန်း ဘာသာစကားများ - ပုဆိန်နှင့်femတ္ထိနာမ်များ၏ဘာသာစကားများ - ၎င်းသည်လက်တင်မှဆင်းသက်လာသောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျားမမခွဲခြားမှီရှေးဟောင်းလက်တင်စကားလုံး၏မူလအစပေါ်မူတည်သည်။ ပုလ်သို့မဟုတ်inတ္နာမ်နာမ်များမရှိပါ။ ဒါကြောင့်ပြင်ဆင်ရန်ပြင်သစ်နာမ်၏ကျား၊ နာမ်၏အက္ခရာအထွေထွေစည်းမျဉ်းများ - နာမ်တစ်ခုသည်အီးတစ်ခုနှင့်အဆုံးသတ်လျှင်ဥပမာ - Lillet သည်ဂျာကင်အင်္ကျီကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိသော la la vest ကိုဆိုလိုသည်။ ကျန်စာလုံးနှင့်အဆုံးသတ်သောစတော်ဘယ်ရီနာမ်ကိုဆိုလိုသည်မှာယေဘူယျအားဖြင့်လူးကပ်စ်လူးကပ်စ်လူးကပ်စ်ဖြစ်သည်။ Guy olá visualmeaning - Jo တစ်ခုတည်းသောအရာကချွင်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဥပမာချစ်ခြင်းမေတ္တာဂုဏ်ပြုခြင်းဆိုတာဒိန်ခဲဆိုတာပုဂ်္ဂိုလ်ဆိုတာတောင်ပုလွေတောင်အဆုံးသတ်တာကိုဆိုလိုတာပါ။ နောက်ဥပမာဥပမာတစ်ခုမှာ Vlad ဖြစ်သည်။ voicethis ဟူသောစကားလုံးသည်isတ္ထိဖြစ်ပြီးစကားလုံးeနှင့်အဆုံးသတ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Lavoiebecause ယေဘူယျပုံစံမှခြွင်းချက်များစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်လေ့လာသင်ယူရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့်အပြင်ပုလ်နာမ်များနှင့် Lou Ninafor အတွက်ဆောင်းပါးများကိုအတူတကွရေးသားထားသည်။ Louella I သည်အင်္ဂလန်ရှိဆောင်းပါးကိုကြိုက်သည်။ fem fem no no no fem fem fem earth earth earth earth earth earth earth earth earth earth earth earth earth earth earth fem fem earth earth earth earth earth earth French earth earth earth earth earth earth earth earth earth earth earth earth earth earth earth earth earth earth ပြင်ဆင်ရန်နာမ်၏ကျား၊ looDoCoMo လိုမျိုးဒိန်ခဲလိုမျိုးဒါမှမဟုတ် wazoo (သို့) ငှက်လိုမျိုးစာရွက်စာတမ်း၊ Muirif အားလုံး lumia wah လိုမျိုးစာလုံးပုံစံကိုပြင်သစ်ဘာသာလေ့လာတဲ့အခါမှာနာမ်တွေဟာပုဆိန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သောinတ္ပုံစံများဟာသမုဒ္ဒရာကဲ့သို့သောသူတို့နိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ laliberté (သို့) Liberty လို၊ မြေကြီးသည် lash altars များကဲ့သို့ or earth ကဲ့သို့သောငါသာဖော်ပြခဲ့သောပုလ်ပုံစံငယ်လေးများနှင့်တူသကဲ့သို့သင်သည်ထိုစကားလုံးများကိုစုဆောင်းနိုင်သည် ဤအက္ခရာဖြင့်အဆုံးသတ်ခြင်းသည်femတ္ထိ are it's it's it's it's it's it's it's it's it's အရေးကြီးသည်ကနာမ်သည်မည်သည့်ကိန်းဂဏန်းဖြစ်သည်ကိုသတိရရန်အရေးကြီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပြင်သစ်ရှိဝါကျ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုလွှမ်းမိုးသည်။ ဥပမာနာမဝိသေသနများသည်သူတို့၏စာလုံးပေါင်းကိုအပြောင်းအလဲပြုသည်။ is masculine သည်ဒေသတွင်းအပြာရောင်ဖြစ်သည်။ အပြာရောင်ကုလားထိုင်ဖြစ်ပြီးမိန်းမအပိုသည်အပြာရောင်ဖြစ်ပြီးထပ်ဆောင်းအီးပါရှိသည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက၊ အောက်ပါမှတ်ချက်များတွင်ချန်ထားပါ။ သူတို့ကိုမကြာမီသင်ကြားပေးပါလိမ့်မည်။